Dalxiiska Seychelles oo ku socda wadadii lagu gaari lahaa bartilmaameedyada imaatinka 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles oo ku socda wadadii lagu gaari lahaa bartilmaameedyada imaatinka 2021
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dalxiiska Seychelles wuxuu soo dhoweynayaa kororka soo -galayaasha soo booqda
Waxaa jira wax badan oo loogu dabaaldego jasiiradaha Seychelles bisha Luulyo. Kaliya maahan Dalxiiska Seychelles oo xusaya sannad -guuradii 50 -aad ee furitaankii gegeda dayuuradaha caalamiga ah oo soo dhoweynaya duulimaadkeedii ugu horreeyay ee ganacsi, kaasoo bishii Luulyo 1971 bilaabay warshadaha dalxiiska jasiiradaha Badweynta Hindiya, laakiin wuxuu sidoo kale soo dhoweeyey isla maalintaas 2021, booqashadii 50,000th tan iyo tan go'aankii geesinimada lahaa 25 -kii Maarso ee ahaa in dalka loo furo dhammaan booqdayaasha la tallaalay iyo in kale.
Seychelles, kala -duwanaanshaha iyo tallaalku waxay faaiido u yihiin dalxiiska iyo dhaqaalaha.
Wadanku wuxuu bilaabay barnaamij talaal oo hami leh oo muwaadiniintiisa laga bilaabo Janaayo 2021.
Tani waxay umadda u dirtay sumcad ahaan inay tahay waddanka ugu tallaalka badan adduunka, taasoo saldhig u ah istiraatiijiyaddeedii ay dib ugu bilaabi lahayd dhaqaalaheedii aasaasiga ahaa ee dhaqaalaha.
Saamaynta masiibada waxay ahayd mid deg deg ah oo masiibo ku ah dhaqaalaha dalxiiska ku tiirsan ee jasiiradda taas oo aragtay imaanshaha martida inay hoos ugu dhacday 22 booqde bishii Abriil ee sanadkii hore marka la barbar dhigo 37,103 bishii Abriil 2019, dhaqan ahaan bishii labaad ee ugu sareysay sanadka dadka dalxiiska yimaada. Soo galitaanka sarifka lacagaha qalaad (rasiidhada/bixinta sarifka lacagaha qalaad oo loo rogay rupees, oo u badan dakhli dalxiis) oo celcelis ahaan $ 3 milyan oo doolar maalintii ka hor masiibada waxay ku dhacday US $ 1.25 milyan maalintii Abriil 2020, oo hoos ugu dhacday US $ 0.43 milyan badhtamihii Abriil 2020, Bangiga Dhexe ee Seychelles ayaa shaaca ka qaaday. 11 -ka bilood ee soo socda, muddada May 2020 illaa Maarso 2021, celcelis ahaan wuxuu ahaa US $ 1.72 milyan maalintii.
Barnaamijka tallaalka hamiga leh ee muwaadiniintiisa dalkii ku tiirsanaa dalxiiska ayaa bilaabmay Jannaayo 2021, isaga oo u soo jiiday indhaha adduunka oo ah waddanka ugu tallaalka badan adduunka, Seychelles'Istaraatiijiyad ay dib ugu bilaabi doonto dhaqaalihii asaasiga ahaa ee dhaqaalaha isla markaana ay durba bixinayso faaiidooyin.
In kasta oo ay weli aad uga fog tahay 38,910 booqde ee Diseembar 2019, tirada sare ee timid 384,204 sannadkaas iyo dakhliga dalxiiska oo sannadka 2019 ka ahaa 76 boqolkiiba wadarta guud ee soo gashay, tirooyinka Bangiga Dhexe ee Seychelles ayaa muujinaya in soo kabashada, in kasta oo ay jilicsan tahay, socda.
Dakhliga dalxiiska, oo ay soo sheegeen bangiyada daboolaya sarrifka lacagaha qalaad oo loo beddelay lacagta gudaha ganacsiyada la xiriira dalxiiska, ayaa hoos ugu dhacay US $ 1.1 milyan bishii Juun 2020. Waxay u taagan tahay sannadkan Juun US $ 23 milyan ama 59 boqolkiiba US $ 38.9 milyan ee isla diiwaangashan bisha 2019.
Laga bilaabo 25 -ka Maarso illaa 2 -da Luulyo, 2021, sarrifka lacagaha qalaad ayaa maalin walba soo gala 2.44 milyan oo doollarka Mareykanka ah. Dib -u -qeexidda muuqaalka macmiilkeeda maadaama suuqyadeedii dhaqameed ay ku dhufteen mowjadaha guulaha ee masiibada iyo caqabadaha sida tallaabooyinka xiritaanka, shuruudaha karantiilnimada iyo xannibaadaha safarka, dalxiiska dalka iyo mas'uuliyiinta gaadiidka iyo hawl -wadeennada waaxda gaarka ah ayaa fiirinayay suuqyada kale ee ilaha, furitaanka diyaaradaha cusub iyo kiraystayaasha, iyo soo dhaweynta laga bilaabo 25 -ka Maarso iyo ilaa 500 booqde celcelis ahaan maalintii.
Kim Waddoup wuxuu ku raaxeysanayay noloshiisa ganacsiga dalxiiska waana firfircoon 'Silver-Ager' oo ku nool Thailand. Wuxuu u qoraa kooxda da'diisa maqaallo aad u kala duwan oo ka hadlaya maaddooyinka khuseeya hawlgabyada ku nool, ama booqanaya Thailand.